Apple inotanga kubvisa maapplication kubva kuApp Store yevagadziri veIran | IPhone nhau
Mumwedzi yapfuura tiri kuona mavakomana kubva kuCupertino vari kuita sei dambudziko risinganzwisisike nechimwe chavo chikuru sosi yemari: iyo App Store. Mavhiki mashoma apfuura hurumende yeChinese yakaraira kuti Apple ibvise kubva kuApp Store zvese izvo zvinoshandiswa zveVPN izvo Ivo havana kutevedzera zvinodiwa nemutemo mutsva waakabvumidza.
Asi Apple haingotarisana nematambudziko ari kure nemiganhu yayo, zvakare inofanira kutevedzera zvinodiwa nehurumende yayo. Sekureva kweThe New York Times, Apple iri kubvisa kubva kuApp Store nhamba hombe yezvikumbiro kubva kuvagadziri veIran vanoenderana nezvinodiwa nezvirango zvehurumende yeAmerica.
Apple haipe chero zvigadzirwa zvayo muIran. Iko hakuna zvakare App Store, asi munyika mune mamirioni mazhinji vashandisi ve iPhone, avo vakawana michina yavo muDubai kana Hong Kong, kubva kwavanenge vaine maakaundi avo ekuisa mashandisiro pane iyo iPhone. Iyo hombe nhamba yevagadziri vanogadzira kunyorera muIran vanopa zvakafanana kubva kune mamwe maApple Stores, asi zvinoita hachisi chikonzero chakaringana kuti Apple iremekedze kunyorera.
Sezvatinoverenga muThe New York Times, mafomu ekuendesa chikafu, zvigadzirwa zvekutengesa, masevhisi uye chero chishandiso chakagadzirwa neanogadzira weIran chanyangarika kubva kuApp Stores ese. Vagadziri vese vakavhiringidzwa nesarudzo iyi vakagamuchira email, mavanoudzwa nezvazvo kubviswa kwechikumbiro chayo nekuda kwezvirango zvehurumende yeAmerica kunyika.
Mutauriri wekambani akasimbisa danho iri, asi aramba kutaura nezvenyaya iyi. Izvo zvese zvakatanga muna Ndira, apo Apple yakatanga kubvisa maapplication kubva kuApp Store. MunaFebruary, Apple yakabvisa mhando dzese dzekubhadhara dziripo mumashandisirwo aive achiripo. Masanctions matsva ehurumende yeUS kuIran ane chekuita nesarudzo dzichangoburwa dzakaitwa nemutungamiri wenyika VaDonald Trump mumwedzi yapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple inotanga kubvisa maapplication kubva kuIrish Developers 'App Store
iOS 11 inoratidza zvimwe zveiyo firmware yeinotevera Apple Watch